Arnica (အာနီကာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Arnica (အာနီကာ)
Arnica (အာနီကာ) ကဘာလဲ။
Arnica ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Arnica ကို အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်းတွေအတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ သူ့ကို အညိုအမဲစွဲခြင်းတွေ၊ ဒဏ်ရာတွေ၊ ဝက်ခြံ၊ ရေနွေးပူလောင်ခြင်းတွေနဲ့ အနီကွက်တွေကို ကုသဖို့အသုံးပြုပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါတွေမှာလည်း ကော်လက်စထရောကို ကျဆင်းစေဖို့ ဆေးဖက်ဝင်အပင် ကျွမ်းကျင်သူတွေက စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးရင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူ အကူအညီမပါပဲ Arnica ကို မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ သူ့ကို အချိုရည်တွေ အချိုပွဲတွေထဲမှာ ပမာဏ အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ဖို့အတွက်ရော၊ ဗောက်ပျောက်ဖို့အတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အဆီကို ရေမွှေးတွေနဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေမှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Arnica ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် ဆေးဖက်ဝင်အပင်ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း အချို့ လေ့လာမှုတွေက အောက်ပါ အာနိသင်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Arnica အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကလေးတွေ လက်လှမ်းမမီတဲ့နေရာမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ အပွင့်တွေ၊ အပင်ရင်းတွေကို စားမိရင် သေနိုင်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အပင်ပညာရှင်ရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုမပါရင် Arnica ကို ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းပိုင်းအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ Arnica ဟာ အဆိပ်ရှိပြီးတော့ နှလုံးကိုလည်း အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ် အဆိပ်တက်မှုလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးကို အချိန်အကြာကြီး သုံးစွဲရန် မသင့်ပါဘူး။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ ဆေးဖက်ဝင်အပင်ဖြည့်စွက်စာ အတွက် စည်းမျဉ်းတွေဟာ ဆေးတွေရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေလောက် တင်းကျပ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အာနိသင်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် လေ့လာမှုတွေ ပိုမိုလိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒီ ဆေးဖက်ဝင်အပင်ဖြည့်စွက်စာကို မသုံးစွဲခင် ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို ဒွန်တွဲစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် ဆေးဖက်ဝင်အပင်ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Arnica က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Arnica ဟာ အဆိပ်ရှိတာကြောင့် ဆေးထိုးခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။ သေစေနိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူက စောင့်ကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းပိုင်းအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ Arnica ကို ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိ (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Arnica ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
• ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အစာမစားခြင်း
• မောခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Arnica ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
• အသည်း ပျက်စီးခြင်း
• Sweet syndrome (ရုတ်တရက်သွေးဖြူဥဆဲလ်ကျ အဖျားတက် အရေပြားထိသော ရောဂါ)
• ကိုမာဝင်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း
Arnica ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Arnica ဟာ သွေးတိုးကျဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
APTT, PT, INR အစရှိတဲ့ သွေးခဲခြင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်း မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
Arnica အတွက် ပုံမှန်အသုံးပြုရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Arnica ကို သောက်ဆေးအဖြစ် (သို့) စုပ်ယူနိုင်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါ အပေါ်ယံအရေခွံပြဲနေတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အပေါ်ယံလိမ်းဆေးဖို့အတွက် ဆေးအချိုးအစားကို သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒီဆေးကို အာနိသင်ထိရောက်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပမာဏနှင့် ပတ်သက်ပြီး စမ်းသပ်လေ့လာထားမှုများ အလုံအလောက်မရှိပါ။
Arnica ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်ဖြည့်စွက်စာ တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Arnica က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Arnica ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
• လျှာအောက် ငုံဆေး
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 3, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 26, 2017
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 35
Arnica. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 721-
arnica.aspx?activeingredientid=721&activeingredientname=arnica. Assessed date 12/11/2015Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 35